Bubata ụgbọ ala si Singapore na UK | Importgbọ M Mbubata
EU na UK
USA na UK
Ezumike nke ụwa gaa UK
Zụta Cgbọala SITE UK NA NZ
Mbupu ụgbọ ala na UK
Ndebanye aha DVLA
Ule Ugbo ala UK
Mmadụ Bịa ka
Ndị UK Bubata Cargbọ Ala
Na-ebubata ụgbọ ala si Singapore na United Kingdom?
Anyị bụ ndị ọkachamara na-ebubata ụgbọ ala si Singapore, gụnyere mbupụ, mbupu, mkpochapụ kọstọm, ụgbọ ala UK, nyocha nnabata na ndebanye aha DVLA. Anyị na-edozi usoro ahụ dum, na-azọpụta gị oge, nsogbu na ụgwọ a na-atụghị anya ya.
Nweta okwu ebe a
Banye ụgbọ ala gị na United Kingdom
Anyị ji nlezianya ahọrọ ndị ọkachamara ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na Singapore ka ha nwee ike ijikwa ụgbọ ala ndị ahịa anyị. Anyị na-enye nchịkọta nchịkọta n'ime oke obodo. LTA ịdebanye aha nke ụgbọala ahụ bụ usoro ntanetị ugbu a ma anyị nwere ike ịnye ndị nduzi otu esi eme nke a iji hụ na ị nwetara ụgwọ ndebanye aha Singapore dị mkpa dị ka nkwụghachi. Anyị na-ebu ụgbọ ala si Singpore na-eji ihe eji eme ihe, nke pụtara na ị na-erite uru site na ọnụ ala dị ala maka ịkwaga ụgbọ gị na UK n'ihi ịkekọrịta oghere akpa na ụgbọ ala ndị ọzọ anyị na-ebubata na ndị ahịa anyị.
Ego ole ka ị ga-akwụ iji bubata ụgbọ gị?
Mgbe ịbubata ụgbọala si Singapore, e nwere ụzọ anọ dị iche iche isi kpochapụ omenala na UK, dabere n'ụgbọ ala ahụ, afọ na ọnọdụ gị:
Ọ bụrụ na ibubata ụgbọ arụpụtara na mpụga EU, ị ga-akwụ ụgwọ 20% VAT na ọrụ 10%
Ọ bụrụ na ibubata ụgbọ arụpụtara na EU, ị ga-akwụ ụgwọ 20% VAT na £ 50 ọrụ
Ọ bụrụ n ’ibubata ụgbọ karịrị afọ 30 ma ọ gbanwebeghị nke ọma, ị ga-akwụ ụgwọ 5% VAT naanị
You na-alaghachi azụ dị ka onye na-ebufe onye bi na United Kingdom? Ọ bụrụ n'inwere ụgbọ ala ahụ ihe karịrị ọnwa isii ma nwee ihe akaebe nke ibi na Singapore na-agbatịghachi ọnwa 12 - mgbe ahụ mbubata gị ga-erubere iwu isi na ụtụ isi.
Mgbanwe ụgbọ ala na ụdị nnabata
Maka ugbo ala ndị na-erubeghị afọ iri, si Singapore, ụgbọ gị ga-erubere ụkpụrụ UK. Emere nke a site na IVA na-anwale ụgbọ gị site na iji nke anyị ụzọ nyocha IVA. Nke a bụ naanị ụzọ nyocha IVA na-arụ ọrụ na nzuzo na mba ahụ ma na-ebelata oge ichere ka edebanye aha ụgbọ gị ma e jiri ya tụnyere iji ọrụ mbubata ụgbọ ala.
Cargbọ ala ọ bụla dị iche iche biko biko nweta ọnụahịa ka anyị wee kwurịta nhọrọ ọsọ ọsọ na ọnụego kachasị maka ọnọdụ gị.
Arsgbọala ndị si na Singapore gaa UK nwere ike ịchọ ụfọdụ mgbanwe, gụnyere speedo iji gosipụta ịgụ MPH na nkwụsị ọkụ ọkụ azụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị na mpaghara ọkụ.
Anyị ewulitela ọtụtụ ihe ọmụma banyere ụdị na ụdị dị iche iche site na ahụmịhe, yabụ nwere ike ịkọwa gị maka ihe achọrọ ime ụgbọ ala gị.
Ugbo ala karịrị afọ iri
Ihe karịrị ụgbọala ndị dị afọ 10 bụ nnabata nnabata, mana ka na-achọ nyocha MOT na mgbanwe ụfọdụ dịka ndị ahụ maka ule IVA tupu ị debanye aha.
Mgbanwe ndị ahụ dabere na afọ mana ọ na-abụkarị ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ. Ọ bụrụ na ụgbọ gị gaferela afọ 40 ọ chọghị ule MOT ma enwere ike ibuga gị na adreesị UK gị tupu edebanye aha ya.
Anyị na-enye ọrụ mbubata zuru ezu
A na-ahụ maka akwụkwọ ndị ahịa, ọrụ mbubata na ụtụ isi.
Transportationgbọ njem zuru ezu na-aga n'ụlọ anyị.
Ule zuru ezu
Dị mkpa maka ụgbọ ala gị ka ịdebanye aha n'okporo ụzọ UK.
A na-enyefe ụgbọala gị na ebe ọ kwesịrị ịdị.
Dị ụgbọ ala
NA ANYI NA-Arụ ọrụ
nnukwu ụgbọ ala
Ego ole ka ọ na-eri iji bubata ụgbọ ala si Singapore?
Na My Car Mbubata anyị na-enye ọrụ mbubata zuru ezu, agbanyeghị, ederede ọ bụla na-akpọrọ ụgbọ ala gị na ihe ị chọrọ. Egbula oge ịbịakwute gị maka ọrụ ọ bụla ị ga-eji mbubata ụgbọ gị si Singapore na United Kingdom.
Ihe omuma anyi mara banyere ugbo ala karie nfe ka anyi nye gi ezi ego ibubata ugbo ala gi.